Kulan looga hadlayay xaaladda amni ee Muqdisho oo Villa Somalia ka dhacay | Dhacdo
Kulan looga hadlayay xaaladda amni ee Muqdisho oo Villa Somalia ka dhacay
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Maxamed Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay Xarunta Villa Somalia kula kulmay Madaxda Dowlad Goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) iyo Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Dhinacyada ayaa ka arrinsaday xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan xaaladda amni ee ka soo korortay Magaalada Muqdisho, ka dib dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Jimcihii dib uga soo cusboonaaday magaalada.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo culeys uu kaga imaanayo Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada Galmudug ku metela Golaha Shacabka ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in kulankan uu isagu dalbaday.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug uu Madaxda Dowladda Federaalka wax ka weydiiyay, haddii wax iska bedeleen mowqifkii dowladda ee wadahadalada habeenkii Arbacada lala bilaabay Taliyihii hore ee Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, General Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon).
Saadaq Joon ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii isaga baxay deegaanka aadka loo ilaaliyo ee ku dhow Garoonka Aadan Cadde, ka dib markii dhaqdhaqaaq ciidan halkaasi laga dareemay, isagoona dib ugu laabtay xaafadda Shirkoole ee Degmada Hodan.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad iyo Xoogaga NISA ayaa lagu arkay nawaaxiga Garoonka Aadan Cadde, waxaana la sheegay inay u socdeen in ay gacanta ku soo dhigaan Saadaq Joon.
Geba-gabadii kulanka Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle ayaa waxaa Warbaahinta la hadlay Wasiirka Amniga Somaliya, Xasan Xundubey Jimcaale, kaasoo sheegay inaanay Dowladda Federaalka qorsheyneyn weerar ay jananka ku qaaddo.
“Dowladda haddii ay rabto inay tallaabo ka qaaddo, saacadihii ugu horeysay ayay tallaabo ka qaadi kartay, laakiin lama qorsheyn in ninkaas arrintiisa wax tallaabo ah laga qaado. Hadda oo ay ka soo wareegatay maalmo badan wax dan ah oo ku jira dowladda uma aragto in haba yaraatee meesha uu hadda degan yahay, oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro wax dan ah oo ku jira ma jiraan.” Ayuu yiri Wasiir Xundubey.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay inay ciyaarta Madaxweyne Farmaajo aad u fahamsan yihiin, isagoonka dadka deegaanka ugu yeeray inay is difaacaan, haddii la soo weeraro.